atody | GAZETY_ADALADALA
Posted on 02/04/2010 by gazetyavylavitra
Ho avy ny fety kristiana ‘Paka’. Tsy misaraka amin’io andro io sy ny manodidina azy ny resaka Chocolat, lakolosy, bitro sy atody. Misy tantarany ny niavian’ireny, saingy tsy hidirantsika lalina loatra.
Midika inona ho an’ny maro ary ny ‘Paka’? Ao ny mandray azy ho ilay Andro nitsanganan’i Kristy taorian’ny namonoana azy. Ao ny mandray azy ho androm-pibebahana sy Fihavaozana indray eo amin’ny fiainana. Ao ny mametraka azy ho toy ny andro firavoravoanan fihinanana sy fisotroana fotsiny.
Fanao any ivelany any, rehefa tonon’andro ‘Paka’ ny mifanolotra zavatra ka isan’ireny ny ‘atody’. Zavatra fady tamin’ny Malagasy sasany tany aloha tany izany hoe mifanolotra atody izany. Maha kizo fara sy mahaboribory fiainana, hono (ataovy an-tsaina ilay fiteny hoe : vato kiboribory). Fa ankilany kosa anefa dia midika fitohizan’ny aina izy, nefa koa raha ny bikan’ny ivelany no jerena dia milaza fahatanterahana. Mifamela ny olona nanana disadisa amin’io andro io, na efa mialoha azy akory aza (mandritry ny herinandro masina).
Be ny disadisa amin’izao fotoana eto amin’ny samy Malagasy (tsy ny monina sy mipetraka eo ambonin’i Madagasikara ihany, fa na ireo zanaka am-pielezana eran-tany koa aza). Mba hisy ve izay fifamelana sy fihavaozana izay amin’ity ‘Paka 2010’ ho avy ity? Nandeha ny feo fa hoe taorian’ny tsidika tselatra nataon’ireo iram-panjakana frantsay mba hitadiavana vaha olana momba ny krkizin’i Madagasikara, dia mery hisy ny fihaonana Andry RAJOELINA sy Marc RAVALOMANANA. Nilaza anefa MArc RAVALOMANANA androany fa tsy misy an’izany ary tsy hihaona velively amin’i Andry RAJOELINA raha tsy eo koa RATSIRAKA Didier sy ZAFY Albert. Mandeha koa ny fivoriana ankiafinafina etsy sy eroa. Voalaza mihitsy fa misy fikasana hanongam-panjakana any ho any. Resahana ny mety hisian’ny ‘explosion sociale’ goavana eto Madagasikara ato ho ato. Karazana atody re izao.
Mba iza amin’ireo atody ireo no tianao hatao fanomezana amin’ity ‘Paka 2010’ ity?
Ny irariana fotsiny dia ny mba hahaizan’ny tsirairay mifanolotra ny atody tsara indrindra, dia ny fihavanana sy ny firaisankina. Fa tsy ho sanatria ‘lamokan’atody’, na ‘atody poak’aty’ efa notrohin’ny mpanolotra mialoha izay tao anatiny, na koa ‘atody vato’ tsy hita ho hanina fa sahaza kosa ho haingon-trano hampiraraka ny ivy fotsiny.
Filed under: fiaraha-monina, finoana, politika, tantaram-pirenena, tapatapany, tsingerina | Tagged: Andry RAJOELINA, atody, Madagasikara, Marc Ravalomanana, Paka |	Leave a comment »